Snapdragon 875: Qualcomm ayaa bilaabay wax soo saarkeedii badnaa | Androidsis
Waxaan horeyba u diyaarinay inaan kugu soo dhaweyno mid ka mid ah barnaamijyada moobiilka ee sanadka la filayo. Tani waxay timid sida Snapdragon 875, processor chipset oo beddeli doona wixii hore loo yiqiin loona adeegsaday Qualcomm Snapdragon 865 waxaana la bilaabi doonaa dhamaadka sanadka, haddii wareegga sanadlaha la buuxiyo.
Soo saaraha ma uusan shaacin wax ku saabsan shaqada SoC wuxuu yiri, laakiin taasi caqabad kuma noqon wararka xanta ah ee ah in wax soo saar badan ee Chipset uu bilaabay inuu daadiyo. Waxay ahayd bogga Shiinaha MyDrivers Kii warkan na siiyay saacado ka hor iyo, in kasta oo loo baahan yahay in si rasmi ah looga dhigo shirkadda Qualcomm, haddana kalsooni badan ayaa lagu qabaa, maadaama xilligan la bilaabay soo saaristii kuwii ka horreeyay ee processor-kan muddada dheer la sugayay.
Wax yar ayaa hadhay si loo helo Snapdragon 875
Marka loo eego waxa xariirku muujiyo, SDM875 wuxuu gali lahaa khadadka TSMC, soo saaraha semiconductor-ka Taiwanese, Juun 18, taariikh in, waqtiga daabacaadda maqaalkan, ay kaliya shan maalmood ka dambayso. Xisaabinta la saaray miiska ayaa qiyaasaya in hadda inta udhaxeysa 6.000 ilaa 10.000 unugyada maalinlaha ah ee Nidaamkan-Chip-ka la soo saaray. [Ogow: Snapdragon 865 rux: Samsung waxay bilaabeysaa wax soo saar balaaran oo ah Exynos 992 bisha Ogosto]
Tikniyoolajiyada dhismaha Chipset waxay noqon doontaa 5nm, sidaan sifiican u tilmaamay. Tan, iyo waxyaabo kale, runtii waxtar ayey u leedahay isticmaalka tamarta. Waad ku mahadsan tahay cabbirka noodhka, kaas oo ka yimid 7 nm ee Snapdragon 865 soo bandhigo, ismaamulka qalabka xambaara waa la kordhin doonaa, in kasta oo loo baahan yahay tamar ama dalab in diirkaga bahalku dalban karo ay waxyar isu dheellitiri karto, waana taas sababta ma noqon doonto horumar aad u weyn oo arintan la xiriira.
Galaxy Note 20 Ultra waxaa lagu qalabeyn doonaa Snapdragon 865 Plus oo aan wali la shaacin
Si la mid ah, meel kasta oo lagu arko, tani way wanaagsan tahay, shaki la'aan, labadaba qaybta ismaamulka iyo waxqabadka guud ee ay bixin doonto, oo la sheegay inuu aad uga sarreeyo kuwii horeyba u soo saaray chipsets-ka calanka. .
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » 875nm Snapdragon 5 ayaa jidka kusii jira: Qualcomm wuxuu bilaabay wax soo saar balaaran
Iyo si lama filaan ah Apple waxay soo ogaatay wijiyadaha